Rasaasa News – Somaliland oo Qabatay Rag ka Tirsan Ciidanka Awdal State
Somaliland oo Qabatay Rag ka Tirsan Ciidanka Awdal State
on March 10, 2014 4:30 pm
Jabuuti, March 10, 2014 – Maamulka Somaliland ayaa doraad sheegay in ay agagaarka degmada Saylac ka qabteen saddex nin oo hubaysan oo lagu tuhmay in ay ka tirsan yihiin ciidanka wadaniga xoraynta Ogadeeniya (CWXO). Hadaba warar ka soo baxaya maamulka Somaliland, ayaa beeninaya wararkii maamulku hore u baahiyey oo ahaa in ay qabteen rag hubaysan oo ONLF.
Wararka ka imanaya Hargeysa waxay sheegayaan in raga hubaysan ee la qabtay ay ahaayeen ciidan taageersan maamulka Awdal State. Awdal State ,ayaa ka mid ah maamulada ka jira Somaliya, gaar ahaana waqooyiga Somaliya, kaas oo si wayn uga soo horjeeda maamulka Somaliland oo isagu sheega in uu ka go,ay Somaliya.
Wararku waxay sheegayaan in ciidan badan oo taabacsan maamulka Awdal State in ay ka soo gudbeen xuduuda uu maamulka Awdal State la leeyahay Atobiya. Ciidamadan ayaa la tuhunsan yahay in lagu soo tabo baray meelo ka tirsan Atobiya. Ciidamada ayaa la sheegay in ay qaybo yar yar isu qaybiyeen iskuna baahiyeen degaanada uu u nasab sheegto maamulka Awdal State.
Maamulka Somaliland ayaa ciidamo tiro badan oo hubaysan tan iyo shalay u soo daad guraynaya dhinaca gabalka Awdal iyo Salal, ka dib kolkii ay warka ka heleen saddexdii nin ee la qabtay doraad. Dadka degaanka Saylac ayaa sheegay in ay arkeen 6 nin oo hubaysan iyo 5 nin oo hubaysan oo lagu arkay meelo kala duwan.
Maamulka Somaliland ayaa laga yaabaa in uu cidhiidh galo hadii ay furin kale kaga furanto galbeedka, iyada oo awal ay hore Bariga ugagga furay furinta Khaatumo State [Puntland].